Halyeyga Chelsea Ee Joe Cole Oo Magacaabay SHANTA Laacib Ee Ugu Wanaagsan Da'yarta Ka Ciyaarta Premier League - Gool24.Net
Halyeyga Chelsea Ee Joe Cole Oo Magacaabay SHANTA Laacib Ee Ugu Wanaagsan Da’yarta Ka Ciyaarta Premier League
Halyeygii xulka qaranka England ee Joe Cole ayaa shaaciyey shanta ciyaartoy ee ugu wanaagsan horyaalka Premier League ee ay da’doodu yar tahay, kuwaas oo sannadaha soo socda madadaalin doona taageereyaasha dunida.
Cole oo usoo ciyaaray West Ham, Chelsea, Liverpool iyo Aston Villa, xulka qaranka England u saftay 56 ciyaarood, waxa tibaaxay in shan ciyaartoy oo laba ay isku naadi ka wada tirsan yihiin ay noqon doonaan laacibiinta Ingiriiska ah ee ugu wanaagsanaan doona sannadaha soo socda, isaga oo keenay daliilka dooddiisa.
Ciyaartoydan oo dhamaantood khadka dhexe ka dheela khadka dhexe, waxa uu tilmaamay inay yihiin kuwo ku xiise gelinaya marka aad daawanayso, isagoo xusay meelaha qaarkood ay iskaga mid yihiin.
“Waxaan u tegayaa dhamaan ciyaartoyda khadka dhexe, sababtoo ah waa waxa aniga i xiise geliya. Runtii waa mid adag, laakiin anigu waxaan lasoo baxayaa Jack Grealish, James Maddison, Mason Mount, Phil Foden iyo Billy Gilmour. Dhamaantood waa isku mid, si wanaagsan kubadda u habeeya, waana laacibiin khadka dhexe ee casriga ah.” Ayuu yidhi Joe Cole.
“Si kasta way u ciyaari karayaan. Wiilashani iyaga ayaa isku riixaya inay sii wanaagsanaadaan, waxaanad ku sharatami kartaa inay dhamaantood is daawadaan oo ay isku dayayaan inay horumaraan.” Ayuu mar kale yidhi Cole.
Grealish oo ay da’diisu tahay 24 jir, waxa uu ka mid yahay hantida ugu qaalisan ee suuqa iibka ciyaartoyga xagaagan lagu looollami doono, waxaanu xili ciyaareedkan dhaliyey sagaal gool iyo siddeed uu caawiyey, waxaana saxeexiisa ku loollamaya Tottenham iyo Manchester United.
Maddison oo u ciyaara Leicester, waxa uu isaguna ka ciyaaraa khadka dhexe, waxaanu soo dhaliyey fasal ciyaareedkan sagaal gool iyo saddex kale oo uu caawiyey, Manchester United ayaanu bartilmaameed u yahay.
Mount oo 21 jir ah iyo Gilmor oo 18 jir ah waxay ka tirsan yihiin Chelsea, waana xiddigaha uu kalsoonida siiyey Frank Lampard, halka uu ciyaartoyga shanaad ee Foden yahay 19 jir ka tirsan Manchester City oo loo carbinayo inuu beddelo David Silva oo la filayo inuu xagaaga ka tago Etihad.